फुटबलको महाकुम्भ विश्वकप २०१८ आज देखि सुरु, उद्घाटनमा आयोजक र साउदी भिड्दै कसले मार्ला बाजी ? || सुनौलो नेपाल
फुटबलको महाकुम्भ विश्वकप २०१८ आज देखि सुरु, उद्घाटनमा आयोजक र साउदी भिड्दै कसले मार्ला बाजी ?
आयोजक रुस र साउदीअरेबियाबीचको खेल आज राति पौने ९ बजे सुरु भएसँगै २१औं संस्करणको फिफा विश्वकप सुरु हुँदै छ ।
प्रतियोगितामा २१० फिफा सदस्य राष्ट्रहरुबाट छनोट भएका उत्कृष्ट ३२ टोलीहरुले सहभागिता जनाउँदैछन। पानामा र आइसल्याण्डको यसविश्वकपमा डेब्यू हुदैँछ। प्रतियोगिता जुलाई १५ सम्म चल्नेछ।
सन् १९३० जुलाई १३ देखि ३० जुलाईसम्म उरुग्वेमा भएको पहिलो विश्वकपको उपाधि उरुग्वेले जितेको थियो। त्यसयता २१औँ संस्करणमा आइपुग्दा केवल ८ वटा देशले मात्रै उपाधि जित्न सकेका छन्। यसमा ब्राजिलले अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी पाँच पटक विश्वकपको उपाधि जितेको छ। जर्मनीले र इटालीले चार चार पटक, अर्जेन्टिना र उरुग्वेले दुई पटक विश्वकप र फ्रान्स, इङल्याण्ड र स्पेनले एक एक पटक विश्वकपको उपाधि हात पारेका छन्।